TkSports – Page2– Stay up-to-date with our latest news!
Soccer Guides Facebook Page မှ ပြန်လည်ကူးယူတင်ပြပါသည်။ ဆောင်းပါးမရေးခင်မှာ ပြောချင်တာလေးရှိပါတယ်… သူများကို ပေါင်ကြားထဲက ထည့်နိုင်တာဟာ ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်သလို အသင်းအတွက်လည်း အထောက်အကူဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်… ကိုယ့်ရဲ့ Skills ပြချင်စိတ်ကြောင့် ဘောလုံးပျက်ပြီး ဂိုးပေးရတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တာကို သတိပြုပါ… သူများပေါင်ကြားထဲ ထည့်နိုင်မှ ပိုကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး… ကွင်းကြီးမှာတော့ Dribble လုပ်ရင်း အထည့်ခံရရင် ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်… Pro တွေဆို ဆက်မလိုက်တော့ပဲ ချီးကျူးတတ်ပါတယ်… လက်ခုပ်တီးပီး ဂုဏ်ပြုတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်… ဖူဆယ်မှာကတော့ Panna နဲ့ Nutmeg ဆိုတာ ရိုးနေပါပြီ… ဟုတ်ပြီ… ရေးချင်တာလေးကို စပါ့မယ်… ပေါင်ကြားထဲထည့်တာကို Panna နဲ့ Nutmeg ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခေါ်ပါတယ်… တစ်ခုချင်းတော့ နောက်ပိုစ်တစ်ခုမှ ထပ်ရှင်းပြပါ့မယ်… ဒီပိုစ်က…
German Bundesliga : Goals & Highlights
Koln vs Dortmund Paderborn vs Freiburg Augsburg vs Union Berlin Mainz vs Monchengladbach Dusseldorf vs Bayer Leverkusen Hoffenheim vs Werder Bremen Schalke vs Bayern Munich Hertha Berlin vs Wolfsburg Leipzig vs Frankfurt
Spain La Liga : Goals & Highlights
Atletico Madrid vs Getafe Real Betis vs Valladolid Espanyol vs Sevilla Alavas vs Levante Cella Vigo vs Real Madrid Bilbao vs Barcelona
Soccer Guides Facebook Page မှ ပြန်လည်ကူးယူတင်ပြပါသည်။ Shots မှာ7မျိုးလောက်ရှိသေးတယ် … Standard Shots , Straight Shots, Inside Shots, Chip Shots, Toe Shots, Outside Shots, Bending Shots ရယ်လို့ အများကြီးပဲ… အဲဒီအထဲကမှ Bending Shots လို့ခေါ်တဲ့ Curving Shots အကြောင်းရေးမှာပါ… Curving Shots ဆိုတာက အကွေးကန်တယ် လို့တော့ မခေါ်နဲ့ … ဝေ့ဝိုက်အောင်ကန်တဲ့နည်းလို့ အဓိပ္ပါယ်မှတ်ကြမယ်ဗျာ… Curving Shots ကို Curl or Bend Shots လို့လည်း ခေါ်သေးတယ် … စပိန်လိုကျတော့…
Premier League September 17, 2019 - 12:00 am
Secondary League September 19, 2019 - 9:25 am
Premier League September 21, 2019 - 12:00 am
Select League NBA Finals 2015 Primary League 2018 Primary League 2016
August 20, 2019 Panna Trap
August 19, 2019 German Bundesliga : Goals & Highlights
Select League NFL Finals Premier League Secondary League U-19 World Championship
Upcoming matchesFull table
2016 San Jose City Splash: Breaking it Down
Around the AFC West: Splashes Kick Off Season with super Bowl rematch Thursday
Panna Trap August 20, 2019
German Bundesliga : Goals & Highlights August 19, 2019
Copyright © 2019 Splash Themes. All rights reserved
12:00 am Norwich Manchester City	 12:00 am Bournemouth Everton	 12:00 am Watford Arsenal	 12:00 am Aston Villa West Ham	 9:25 am Stylemix Band Quick Winners
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tksports/public_html/wp-includes/functions.php on line 4339